ဗြိတိသျှဟာသဒါရိုက်တာနစ်ခ်ဂျုံးစ်မူရင်းနှင့်ဆက်သွယ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဗြိတိန်ဟာသဒါရိုက်တာနစ်ခ်ဂျုံးစ်မူရင်းပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Los Angeles-မူရင်း ဗြိတိန်ထိပ်တန်းစီးပွားဖြစ်ဟာသဒါရိုက်တာတဦးတည်းလက်မှတ်ထိုးရန်လန်ဒန်ထုတ်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ နစ်ခ်ဂျုံးစ် eHarmony များအတွက်ရယ်စရာအစက်အပြောက်ညွှန်ကြားထားပြီး, Sony က PlayStation AT & T, မာစီဒီး, Walmart, မက်ဒေါ်နယ်, Kia, Heineken နှင့်အခြားအမှတ်တံဆိပ်များ၏ရမှတ်များ။ မူရင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကြော်ငြာခြင်းစီမံကိန်းများအတွက်သီးသန့်သူ့ကိုကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ်။
"နစ်ခ်တစ်ခုအလွန်ပါရမီရှင်ဟာသညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်သဘာဝရယ်စရာလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်" ဟုမူရင်းအလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူဘရုစ် Mellon ကပြောပါတယ်။ "နစ်ခ်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အတူအမှန်တကယ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်တစ်ဦးရယ်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲသိတယ်, ဘယ်လိုလူသားတစ်ဦးထိတွေ့နှင့်အတူအဲဒီလိုလုပ်ဖို့။ " မူရင်းမိတ်ဖက်ဂျိုး Piccirillo ထည့်ပေးသည်, "သူကမူရင်းဖို့အလွန်ကြီးစွာသောထို့အပြင်ဖြစ်၏။ "
ဂျုံးစ်ဂီတဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ပြီးနောက်ဆယ်နှစ်ကြော်ငြာ directing ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအအားသာချက်သတ္တုများပုံသွန်း, အရေးအသား, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၌ရှိကြ၏။ သူလည်းတစ်ဦးစိတ်အားထက်သန်အမြင်အာရုံမျက်စိနှင့်များ၏နည်းပညာပိုင်းအခြမ်းတစ်ခု encyclopaedic အသိပညာရှိပါတယ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး.
မကြာသေးခင်က eHarmony ကြော်ငြာဘို့, သူ (တစ်ဦးယုတ်ညံ့ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုကကံဆိုးရှာသောလုလင်ကိုရန် "လိုက်ဖက်" သူ) တစ်ဦး 1300 ပေါင် dromedary ၏အလေးချိန်ကျင်းပရန်တစ်အိပ်ရာသို့ built တစ်သံမဏိထောက်ခံမှု system ကိုဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။
ကြော်ငြာများတွင်ဂျုံးစ်ရဲ့ဟာသမကြာခဏ Oblique သို့မဟုတ် incongruous အခြေအနေများတွင်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားသာမန်ရိုးရာအပေါ်စင်တာ။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုဆှဖှေဲ့ Plus အားများအတွက်မကြာသေးမီကကြော်ငြာတစ်ဦး banal သက်သေခံချက်ပုံစံကြာပေမယ့်တစ်ဦးမဲ့လှည့်ကွက်ပေးသည်: စုံတွဲတစ်တွဲစိတ်တော်ဒီတော့စိတ်အားထက်သန်သောသူတစ်ဦးချေးငွေအရာရှိအကြောင်းကို gushes သူမကသူတို့ရဲ့အငှားမိခင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မြေအောက်တစ်ကွက်အတွက်သွက် Zumba session တစ်ခုမှတဆင့်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလူတန်းစားကိုဦးဆောင်မယ့်လူကိုသူ hypnotized ခဲ့ရဲ့တွေ့ရှိရန်နှိုးသာသည်သူ၏အတွင်းခံအဝတ်အစားဝတ်ဆင်လူများ၏အပြည့်အဝမယ့်ပြဇာတ်ရုံထဲမှာကခုန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
"ကျွန်မကအများဆုံးလုပ်ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရင့်သူတွေကိုအားဖြင့်ကောင်းသောပစ္စည်းပေးထားခဲ့ရန်အလွန်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်," ဂျုံးစ်ကပြောပါတယ် "နှင့်သူတို့ထဲကအတော်များများတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးငါ့ထံသို့ပြန်လာကြပြီ။ "
ကဲ့သို့သောဗြိတိန်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးအလုပ်လုပ်နေစဉ်ဂျုံးစ်သည်သူ၏သတ္တုများပုံသွန်းမျက်စိရယူနိုင်ပါတယ် Bruiser နှင့် Eastenders ။ သူမာတင် Freeman ကရှိမုန် Pegg နဲ့ရစ်ကီ Gervais အပါအဝင်ကတည်းကအကြီးအောင်မြင်မှုအပေါ်သွားသောသရုပ်ဆောင်များကို၏နံပါတ်တစ်ပထမဆုံးချိုးအပ်ပေးတော်မူ၏။ "ငါသည်ကောင်းသောလူတွေကိုရှာဖွေတာနဲ့သူတို့ကအကောင်းဆုံးပြသနိုင်ဖို့ရတဲ့အချိန်အတော်လေးကောင်းသောတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။
ဂျုံးစ်သူကိုယ်စားပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေအတော်များများမှပြောဆိုသောကြောင့်သူဘရုစ် Mellon နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးလျင်မြန်စွာအဆင်ပြေ၏မူရင်းကို ရွေးချယ်. ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာညာဘက်ခံစားရတယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါနေ့၏အဆုံးမှာဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးသင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တော်မူသောအကြောင်းပါ။ ကောင်းသောဆက်ဆံရေးကို, လူတစ်ဦးမှလူတစ်ဦးတည်ဆောက်ခြင်း, အချိန်ရဲ့စမ်းသပ်မှုကိုယ်စားပြုပါတယ်။ "သူကသူတိုင်းပြည်အနှံ့ကြော်ငြာအေဂျင်စီများ၏ယုံကြည်မှုရှိပြီးတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာထူထောင်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူရှိစေချင်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မူရင်း အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူဘရုစ် Mellon နှင့်ဂျိုး Piccirillo ကဦးဆောင်နေပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခေါ်ဆိုမှု (310) 445-9000, ဒါမှမဟုတ်ခရီးစဉ် www.originalfilm.com.
New York Alliance (PNYA) Post-COVID ကမ္ဘာတွင် Post-Production ထုတ်လုပ်မှုကိုစစ်ဆေးရန် - သြဂုတ်လ 5, 2020
ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ ညွှန်ကြားရေးမှူး မူရင်း ပြောင်းရွှေ့အပေါ်လူတွေ တီဗီနည်းပညာ 2015-03-31
ယခင်: ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးဘို့ Turnkey Solutions ဝေငှရန် JR မီဒီယာနှင့်အတူ 2G ဒစ်ဂျစ်တယ်အပေါင်းအဖေါ်များ
နောက်တစ်ခု: Motion Picture အသံအယ်ဒီတာများဒါရိုက်တာ (MPSE) န်ကြီးချုပ်သစ်ရွေးချယ်ဘုတ်အဖွဲ့